“Johovah Andriamanitra dia niantso an-dralehilahy ka nanao taminy hoe: Aiza moa ianao? “ Genesisy 3:9
“Nandositra hiala eo anatrehan’I Jehovah izy” Jaona 1:10
Izany no fanotaniana voalohany apetrak’Andriamanitra ao amin’ny Baiboly. Fanotaniana niantefa tamin’ny olona voalohany, izay niafina sy nandositra ny tavan’Andriamanitra rehefa tsy nankatὸ Azy. Matetika hita koa io fihetsika io ankehitriny. Maro ny tsy te hifanatrika amin’Andriamanitra ka mandositra Azy. Na izany aza, toy ny nitadiavan’Andriamanitra ifandray tamin’I Adama, dia mbola mitady antsika tsirairay ihany Izy ankehitriny.
Aiza moa ianao? Tsy ny toerana misy antsika tsy akory no anotaniana eto, fa ny toetran’ny fontsika. Ahoana hoy isika rehefa misy miresaka an’Andriamanitra? Azo atao ny mandositra na ny miziriziry mandà ny fisian’Andriamanitra, miafina ao ambadiky ny fitoriana amin’ny hita maso, mialokaloka ao ambadika rijan-kevitra toa hendry, na koa mianiana amin’ny tsy firaharahana izay rehetra mety ho resaka ara-panahy.
Tsy vahaolana velively ny mitady handositra an’Andriamanitra. Indray andro any dia hiseho eo anatrehan’Andriamanitra. Indray andro any dia hiseho eo anatrehany ny olona tsirairay, ary tsy maintsy hizaka ny vokatry ny safidy nataony fahavelona. Anio Andriamanitra dia te hihaona amintsika, amin’izao maha isika antsika izao. Meteza hohazavain’ny fahazavany, aoka tsy hanafina na inona na inona aminy. Tsy famelan-keloka feno ihany no horaisintsika, fa ny fahasoavan’Andriamanitra koa. Izany no hahatonga ho znak’Andriamanitra, miresaka aminy tahaka ny amin’ny Ray, fa tsy miery Azy.